Showing २१-३० of ११४ items.
दक्ष व्यक्तिलाई कामको समस्या हुँदैन
अष्ट्रेलिया जान के गर्नुपर्छ ? कति समय लाग्छ ? परीक्षा प्रणाली कस्तो छ ? कुन विषय पढेका विद्यार्थी जान पाउँछन् ? कति समय लाग्छ ? खर्च कति लाग्छ ? काम पाइन्छ कि पाइँदैन ? भन्ने विषयमा आधारित रहेर १० वर्षसम्म अष्ट्रेलियामा बसेर अनुभव गरेका र हाल ‘नेपकम्स’ का सञ्चालक वसन्त निरौलासँग खिलानाथ विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार :आराम हुनुहुन्छ? के मा व्यस्त हुनुहुन्छ?– हजुर आराम छु । अहिले विद्यार्थीहरूलाई परामर्श दिने कार्यमा नै व्यस्त रहेको छु । किन जाने अष्ट्रेलिया ? जाने प्रक्रिया कस्तो छ ?– मुख्यतः अध्ययनको लागि नै जाने हो । आफ्नो भविष्य बनाउन र जीवनलाई सहजरूपमा जिउनका लागि आधार तय ग
देशमा पछिल्लो केही महिनायता सङ्घीयता खारेजीको मागसहित राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन र प्रदर्शन हुन थालेका छन् । यो प्रदर्शनले देशमा पुनः राजसंस्था ब्युँतिने हो कि भन्ने आशङ्काहरू पनि उत्पन्न हुँदैछन् । यहीबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि देशका विभिन्न जिल्ला तथा सहरमा राजावादीहरूले हिन्दु राष्ट्र, सङ्घीयता खारेज र राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा ओकले । फेरि पनि यस्तै खालको नारा घन्किने तयारी सुरु भएको छ । प्रदेश १ को इटहरीबाट विराटनगरसम्म मोटरसाइकल ¥याली निकालिँदै छ । जसको नेतृत्व स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक प्रदेश १ ले
हितराम तिल्लिङ पछिल्लो समयमा याक्थुङ (लिम्बू) समुदायको भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति र मुन्धुम दर्शनको अध्ययन अनुसन्धानमा व्यस्त छन् । तेह्रथुमको साविक दाङपा–६ (हाल लालीगुराँस नगगरपालिका–५) पुख्र्यौली थलो भएका ३८ वर्षीय तिलिङ हाल धरान–१९ मा एक छोरा, एक छोरी र श्रीमती रूपा तुम्खेवास“ग बस्दै आएका छन् । एमए बिएड गरेका तिलिङको पेशा शिक्षण हो । उनको पछिल्लो पुस्तक ‘याक्थुङ संस्कारहरू’ बजारमा आएको छ । उनका तिल्लिङ वंशावली (२०७४), उद्घोषण तथा प्रस्ताव लेखन कला (२०७५), लालीगुराँस नगरपालिका र यहा“का लिम्बूहरूको इतिहास (२०७६) पुस्तक प्रकाशित छन् । ब्लाष्टले उनै
२,५६३ पटक पढिएको
‘विशेषज्ञ नभएका मान्छेबाट पुस्तक लेखाइयो’
प्रा.डा. टङ्कप्रसाद न्यौपाने आफैमा एक परिचित नाम हो । उहाँ भाषा र साहित्यका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि अभ्यस्त हुनुभएकाले उहाँसँग समसामयिक शैक्षणिक विषयमा ब्लाष्टकर्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः यसै वर्षदेखि नयाँ शिक्षामा लागू गरिएको कक्षा ११ को हाम्रो नेपाली किताबप्रति तपाईंको आपत्ति चाहिँ किन ?–आपत्ति दुईवटा कुरामा हो । पहिलो कुरा, व्याकरणका सम्बन्धमा हो । उदाहरणका लागि सुधा त्रिपाठीको एउटा लेखमा सरल र तिर्यक् कारकको वास्ता गरिएको छैन; जस्तैः एक ठाउँमा मेरो हृदयमा छ, अर्को ठाउँमा मेरा मनमा छ । दुवै ठाउँमा तिर्यक् कारक हुनुपर्ने ।
प्राविधिक विषयको अध्ययनको माग बढिरहेको बेला इटहरीमा नयाँ प्राविधिक कलेज सञ्चालनमा आएको छ । नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले इटहरीमा प्राविधिक कलेज सञ्चालनमा ल्याएको हो । सो कलेजले यसै वर्षदेखि अध्यापन शुरु गर्दैछ । कक्षा सञ्चालनको तयारी, व्यवस्थापन र प्राविधिक शिक्षाको आश्यकताको विषयमा सो कलेजका प्रिन्सिपल अर्जुन उप्रेतीसँग ब्लाष्टका लागि बाबुराम सुवेदीले गरेको कुराकानीः– आजकाल के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?प्रदेश नं. १ कै शैक्षिक केन्द्रविन्दु इटहरीमा बहुप्राविधिक शिक्षालय (पोलिटेक्निक) कलेजमा विद्यार्थी र अभिभावकहरुसँग छलफल गर्दै प्राविधिक धारका विषयहरुको अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्ष
१,५१३ पटक पढिएको
इटहरीमा ०५५ मा महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खुलेको थियो । यो सहकारी अहिले इटहरीकै उत्कृष्ट सहकारीमा दरिएको छ । यो संस्थाले २३ औं स्थापना दिवस मनाउँदैछ । यसै सन्दर्भमा महिला बचतकी अध्यक्ष अमृता सुब्बा सँग धनबहादुर पुरीले गरेको कुराकानी ः महिलाहरूले खोलेको सहकारी कसरी चल्दैछ ? – महिलाहरुलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले सहकारी खोलेका थियौं । देशमै उत्कृष्ट भएको छ । ७५ जना महिलाले १ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरी झोला सहकारीका रुपमा सुरू गरेका थियौं । त्यो बेला सदस्य बनाउनका लागि घरदैलो अभियान सुरू गरेको सहकारीमा हाल १० हजारभन्दा बढी महिला शेयर सदस्य छन् । ९० जना बढीले रोजगारी पनि पाएका छन्
१,३२१ पटक पढिएको
उपमहानगरपालिकाले चाँडै निर्णय लियोस्
कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त छ । त्यसैमध्ये शैक्षिक क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त बनेको छ । सरकारले असोज १ गतेबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो तर, महामारी फैलिइरहेकाले विद्यालय खुल्न सक्ने अवस्था छैन । लामो समयको लकडाउनले शैक्षिक क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पार्यो ? निजी विद्यालयहरूको अवस्था के छ ? जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न ब्लाष्टले धरान–१६ स्थित सियोन स्कुलका निर्देशक खड्गबहादुर थापा मगरसँग गरेको कुराकानीको अंश : शिक्षण क्षेत्रका लागि लकडाउनको अवस्था कस्तो थियो र कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?– विश्वव्यापी महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्र मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रमा
१,०२० पटक पढिएको
‘कसैले खाना नखाएको सुन्दा निन्द्रा लाग्दैन’
११ वडामा विभाजित बेलबारी नगरपालिका कुल १ सय ३२ दशमलव ७९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । अनुमानित ७५ हजार ५ सय ९५ जनसङ्ख्या रहेको यस नगरपालिकाको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर २ दशमलव ५४ रहेको छ । उक्त नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदी विकासप्रेमी व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन् । समृद्ध नगरको घोषणा गरेका बेलबारी नगरपालिका मेयर सुवेदीलसँग नगरपालिकाको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीतिको सम्बन्धमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट आफ्ना नगरका जनतालाई बचाउन नगरपालिकाले के के काम गर्यो ? –विश्व नै कोरोनासँग जुधिरहेको अवस्था छ । शक्तिशाली भनेका देशहरूले समेत कोभिड&n
१,२६९ पटक पढिएको
पूर्वी नेपालमा फरक पहिचान बनाउन सफल भएको मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका मेयर शिवप्रसाद ढकालले नेतृत्व सम्हालेको झण्डै चार वर्ष बित्नै लाग्यो । नगरका मुख्य योजनाकारको छवि बनाएका ढकालले हालसम्म पृथक विकास आयोजनाहरू अघि बढाएका छन् । केही नयाँ योजनाको रूपरेखा पनि तय गरिसकेका छन् । सुन्दरहरैंचामा विकासका योजनाहरू के कस्ता छन् र हालसम्म गरेका गतिविधिको समग्र सेरोफेरोमा रहेर ब्लाष्ट संवाददाता विवेक मिश्रले मेयर शिवप्रसाद ढकालसँग गरेको कुराकानीको केही अंशः सुन्दरहरैँचालाई कमर्सियल नगर पनि भन्ने गरिन्छ, यहाँका विकासका योजना कस्ता रहेका छन् ?–भूगोलको हिसाबले यो नगर अत्यन्तै ठूलो छ, माइग्रेसनको र
१,६६९ पटक पढिएको
‘पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पुनःनिर्माणका काममा लागिरहेका छौं’
दश वडाहरूमा विभाजित केराबारी गाउ“पालिका मोरङको उत्तरीभेगमा रहेको गाउ“पालिका हो । यो गाउ“पालिकाको उत्तरमा धनकुटा रहेको छ भने पश्चिममा सुनसरी रहेको छ । त्यसैगरी पूर्वपट्टि लेटाङ नगरपालिका रहेको छ भने दक्षिणमा सुन्दरहरैंचा नगरपालिका रहेको छ । प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्तै सुन्दर यो गाउ“पालिका पर्यटन विकासको राम्रो सम्भावना बोकेको पालिका हो । वरिपरि खोला र जङ्गलले घेरिएको हुनाले र प्रायः पहाडी भू–भाग भएको हुनाले विकास निर्माणमा केही समस्याहरू रहेका छन् । यसै विषयमा केराबारी गाउ“पालिकाका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्कीस“ग ब्लाष्ट संवाददाता विवेक मिश्रले गरेको कुराक
१,०४६ पटक पढिएको